Ukweqiwa Kwemininingwane Kulimaza Ukukhiqiza | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 2, 2012 NgoLwesine, Februwari 2, 2012 Douglas Karr
Uthando ngokuphelele lokhu okuthunyelwe kwebhulogi kanye ne-infographic evela kumngani uJascha Kaykas-Wolff. UJascha ubengumngane wesikhathi eside kanti uMindjet manje useyiklayenti lethu (futhi kungekudala uzoba ngumxhasi webhulogi!). I-Mindjet ihola imboni ekwakheni ipulatifomu engakuvumeli nje ukuthi wenze imephu ngamasu akho, kepha empeleni ihlanganisa futhi isebenzise izenzo nokuqapha kwesikhathi sangempela.
Kepha njengoba sonke sazi, akuyona nje ivolumu yolwazi ekhulile, kepha futhi nejubane elethwa ngalo. Amaphepha asekuseni nakusihlwa asebenzise umjikelezo wezindaba lapho izindaba zingena khona ezinkundleni zokuxhumana nasezitolo eziku-inthanethi ngemizuzu nje, kushiye nezindaba zekhebula ngemuva. Sesifikile iphuzu lapho iziteshi okuhanjiswa kuzo izindaba nolwazi cishe zingenamkhawulo: izincwadi zezindaba ze-imeyili, okuqukethwe okuku-inthanethi bukhoma, ama-webcam, ukusakazwa njalo, ukuthumela imiyalezo ngokushesha, ukuphakelwa kwe-RSS, i-Twitter, njll.
Lokhu kuqhuma kolwazi olutholakalayo okwenziwe yi-Intanethi kuyamangalisa. Kepha akulona neze iqiniso ukuthi konke lokhu kuholela ekukhiqizeni okungcono. Eqinisweni, ngezindlela eziningi lo mkhukula wolwazi uveza umphumela ohlukile.
Lokhu akuyona imininingwane nje, kubuye kube ukubika kwethu. Njengoba sisebenza neminyango eminingi yezokumaketha, sithola intambo efanayo ukuhlaziywa ukukhubazeka… Isikhathi esidala esiphilayo futhi esihle uma kukhulunywa ngokubika kwanamuhla nokuxhumana. Sithambekele ekugxileni ezindaweni lapho idatha ifinyeleleka kalula, kepha hhayi lokho okuthinta umugqa wenkampani.
Gcwalisa isithombe kusuka ku- JESS3.
Feb 3, 2012 ngo-7: 43 AM
okuthunyelwe okuhle Mnumzane Karr .. 🙂